सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको ५.२ प्रतिशत लाभांश पारित | गृहपृष्ठ
Home लगानी सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको ५.२ प्रतिशत लाभांश पारित
on: ३० पुष २०७५, सोमबार १८:३३ लगानी
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको ५.२ प्रतिशत लाभांश पारित
पुस ३०, काठमाडौं (अस) । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको ५ दशमलव २ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । बैंकको पुस ३० गते काठमाडौंमा सम्पन्न १२औं वार्षिक साधारण सभाले सो लाभांश पारित गरेको हो । बैंकका अध्यक्ष डा. शंकर प्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाले ३ दशमलव ६ प्रतिशत बोनस शेयर र १ दशमलव ६ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । लाभांश सहित सभाले आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल गरी प्रतिवेदनमा पारित गरेको छ ।
साथै, बैंक र सहायक कम्पनी सिविआईएल क्यापिटल लिमिटेड समेतको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित २०७५ आषाढ मसान्तको वासलात, आव २०७४/०७५ को नाफा नोक्सानीको हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका एकीकृत वित्तीय विवरणहरु छलफल गरी स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै, सभाले लेखा परीक्षकको नियुक्ति गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । बैंकको संचालक समितिको २०७५ जेठ २० गते सम्पन्न २६७औं बैठकबाट एफपीओ निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा गरिएको निर्णय अनुमोदन गर्ने लगायतका प्रस्तावहरू पनि सभाले पारित गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो त्रैमासमा बैंकको चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब ७ करोड ९६ लाख रहेको छ । बैंकको जगेडा कोषमा रू. ३ अर्ब ३२ करोड ७२ लाख रहेको छ । सो समयमा रू. ४६ करोड ३३ लाख ८७ हजार खुद नाफा कमाएको बैंकको वितरण योग्य नाफा भने रू. ३६ करोड ७३ लाख ३७ हजार रहेको छ । बैंकको प्रति शेयर आम्दानी रू. २१ दशमलव २६ रहेको छ । हाल बैंकले ८१ ओटा शाखा, ७५ ओटा एटिएम र ९९ ओटा शाखा रहित बैंकिङ एकाइहरुबाट करीब चार लाख ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
सिटिजन्स बैंकको वितरण योग्य नाफा ६५ करोड ९६ लाख
११ माघ २०७५, शुक्रबार १२:१७
सिटिजन्स बैंकको वार्षिक साधारण सभा पुस ३० गते
९ पुष २०७५, सोमबार १४:३४
सिटिजन्स बैंकको कामु सीईओमा पोखरेल
१ पुष २०७५, आईतवार १४:५९